Tag: ederede | Martech Zone
Tag: ide ozi ederede
Kedu ihe bụ SMS? Gịnị bụ MMS? Gịnị bụ Koodu dị mkpirikpi? Gịnị bụ SMS Isiokwu? Site na ire ahia ahia ka m buru ibu, echere m na ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche ịkọwapụta ụfọdụ isi okwu ejiri na ụlọ ọrụ azụmaahịa ekwentị. SMS (Short Service Service) - standardkpụrụ maka izipu ozi telephony nke na-enye ohere izipu ozi n'etiti ngwaọrụ mkpanaka nke nwere obere ozi, na-ejikarị ederede naanị ọdịnaya. (Ozi ederede) MMS (Izi ozi ọtụtụ)
Tuzdee, Machị 5, 2013 Mọnde, Jenụwarị 16, 2017 Adam Obere
Izi ozi ederede abụwo ntọala nke ihe ịga nke ọma anyị na ikpo okwu ahịa ụlọ anyị. Mgbe ihe onwunwe nwetara onye ọbịa, ha na-arịọ maka ozi site na ederede sitere na akara anyị biputere na ahịhịa ha. Mgbe enyere nzaghachi na njem mkpanaka na ozi ụlọ ahịa, a na-agwa onye nwe ụlọ ozugbo ma nwee ike ịkpọ onye ọbịa ma ọ bụrụ na enyemaka dị ha mkpa. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ndị ọrụ anyị nke na-eji usoro ahụ eme ihe ngwa ngwa. Ederede ederede
Otu n'ime ụlọ ọrụ amara nke m na-arụ ọrụ bụ Cantaloupe. Ha nwere ihe di egwu nke ana akpo Backlight na anyi gha anabata ndi mmadu vidiyo anyi. Usoro ahụ na-enye gị ezigbo mma maka ị nweta vidiyo vidiyo gị, na-enye gị ikike maka vidiyo ndị ahụ, ma nwee ezigbo njikọ njikọta nke na-enye gị ohere itinye njikọ dị na usoro iheomume vidiyo gị. Jikọtara ya na ụfọdụ nnukwu vidiyo nchịkọta, ọ bụ ngwugwu siri ike! Ndị ukwu nọ na Cantaloupe
Izu ụka a ka m malitere mkparịta ụka na onye na-ese ihe na mpaghara nke na-enyere onye isi ya aka na njikwa nke ngwa weebụ ole na ole onye isi ya nwere. Mkparịta ụka a gbanwere na ụfọdụ ịpụ na-aga n'ihu banyere ịkwụ ụgwọ mmepe kwa izu na-enweghị ahụ ọganiihu ọ bụla na onye nrụpụta ha na ya rụkọrọ ọrụ. Ugbu a, onye nrụpụta chọrọ ịkwụ ha ego ọzọ a ga-akwụ iji rụchaa ọrụ a kwa izu